トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Fa feno mety teorian'ny ny pachinko
Ianao, ahoana no manamafy ny lehibe tao an-pachinko hira tao anatiny, dia heveriko fa ny ankamaroan'ny izay namely tsy mieritreritra be loatra. Pachinko milina, izay avy eo nametraka ao amin'ny efi-trano dia pachinko, izahay rehetra loteria jackpot ao amin 'ny fomba loteria.
izany, dia lasa miankina amin'ny zava-mitranga ao amin'ny orinasa, ny pachinko milina izay tsy hiaro azy, amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny faneriterena amin'ny alalan'ny dia fikambanana mba nandinika pachinko milina rehetra, dia tsy ho afaka mivarotra. Ary tapa-kevitra ny fomba loteria, niresaka momba izay zavatra, ianao loteria fomba feno fomba mety. Ny
kajy, dia voalaza fa tsy miankina fitsapana. Fa ny jackpot loteria in
pachinko, misy fivoriambe izany tanteraka kisendrasendra loteria. Ao, tanteraka kisendrasendra tanteraka ny tahan'ny mety rafitra, inona no karazana rafitra loteria izany vetivety mampiditra.
ary mety tanteraka io fomba, indray mandeha indray mandeha loteria tsy miankina amin'ireo, dia ny loteria fomba izay tsy tratran'ny vokatra ny lasa sy ny toy izany. Izany dia sarotra ny mahatakatra kely, fa, ohatra, misy baolina ny mena sy manga sy fotsy.
manomboka mandra-baolina miditra, telo loteria baolina manodidina amin'ny tsikelikely roulette. Raha mena no Izany dia ny baolina ny hira, ny fotoana izay nizotra ho any amin'ny sary ahitana ny pachinko baolina manomboka, atsaharo ny roulette, dia lasa lehibe hira mamaritra raha misy mena-baolina eo amin'ny sehatry ny ny isan-.
Ary raha ny fotsy baolina eto, fa ianareo kosa mazava ho azy malahelo raha nataony tao amin'ny tsanganana hira ny roulette, feno azo inoana fomba, satria tsy voatariky ny lasa vokatra, miverina any Matamoto, loteria eo ambanin'ny izany toe-javatra isaky ny hatrany am-piandohana dia tanterahina.
in tanteraka sendra, lasa karazana zavatra dia tsy miankina loteria indray mandeha indray mandeha, hoe inona izany izao no mety fomba feno. Noho izany, hoy ianareo: ara-teorika indray mandeha, in-1000 savoka Hama dia, 2000 heny Hama savoka, nefa tsy maintsy hanodinana ny indray mandeha, manatona fepetra dia tsy miova, dia ho marina ny hoe vintana.
milina Na izany aza, dia Tsy miezaka ny converge ny tsirairay mety jackpot. Noho izany, ny milina raha manaraka ny fatiantoka dia ny miezaka ny Hanompo namely. Izany no zavatra izay voalaza fa ny alon-jackpot, izay voalaza tsara an-dalambe.
ho avy ny mialoha, satria nisintona ny jackpot, fa hijery fomba fisamborana tsara kokoa, izany no olana. Jereo ny vokatry ny lasa ny jackpot, dia ho afaka ny hahita ny onjam-mahery sy tezitra, fa ny jackpot loteria ihany no tanterahina amin'ny kisendrasendra.
narrowed mihitsy aza teo amin'ny lafiny sasany ny fotoana, azo antoka, ny zava-misy fa ny fandresena raha mikendry amin'ity indray mitoraka ity dia: Iza ao amin'ny tsy azo nilaza mialoha, fa toy izany koa pachinko. Koa satria
Hanemono dia kely fivarotana manana Horukon araka ny CR milina, dia mety ho tianao ho fantatra dia hoe ny mety feno loteria. Ho an'ny toeram-pivarotana izay ho samy hafa ny mety ho ny jackpot in Horukon, nefa misy azo antoka tanteraka ny mety, fa tsy mahazatra ianao fiantraikany.